Nzira yekugadzira ruzha rwezwi, 1 kirasi, mienzaniso? | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Munguva pfupi yapfuura, hama yangu kuchikoro akabvunzwa izwi izwi: zhik, tangi.
Ini ndaifanira kurangarira zvese zvakadzidziswa kuchikoro. Ndakayeuka kuti imwe ruvara rwakakodzera kurira rimwe nerimwe. Mazwi anogara ari matsvuku, akapfava emakononi ari girini, uye akaomeswa makononati bhuruu.
Iko zvakare kune fusion yemanzwi apo imwe hafu yedanga yakapenderwa pamusoro nependi rimwe uye imwe yacho neimwe.
Nekuda kweizvozvo, ini nemunin'ina wangu takaronga marongero anotevera. Izwi zhik: tsvuku-bhuruu-tsvuku-bhuruu. Izwi rekuti tangi: bhuruu-tsvuku-bhuruu-bhuruu.
Zvese zvinoitwa zvakapusa.
Neyakagamuchirwa kugamuchirwa kuti ruzha rumwe nerumwe, chimiro charo chinoda rumwe ruvara, mavhawero anoratidza akatsvuka, makomendi akasimba anoratidza kutonhora kwebhuruu, uye vanyoro nyoro vanoratidza girini inodziya. Algorithm:
Kuziva kuti ndedzipi mavara akaomesesa uye ari akapfava, unogona kudhirowa mapatani ezwi chero ripi zvaro, heino mienzaniso:
Izwi rekuti TANK rinotarisa: bhuruu-tsvuku-bhuruu-bhuruu, uye Hedgehog-tsvuku-bhuruu (panogara paine koporoni yakasimba) -redzva-bhuruu.
Kune vadzidzi vechikoro chepuraimari, mavara nemavara ese ane mavara avo pavanogadzira chirongwa chekurira. Iyo nyaradzo yakapfava yakarukwa yakasvibira, iyo yakasimbiswa consonant iri yebhuruu, unkamisa kana tsvuku, nezvimwe. Kana ichisanganiswa nemutinhimira, rectangle ino pendwa kupfuura hafu mune rumwe ruvara, hafu mune imwe. Unogona kuyeuka chirongwa ichi chakareruka uye wongorora chero ruzha, unogona kushandisa mavara akagadzirwa, tsamba yega yega yakatopendwa. Maekisesaizi akadaro anotendera mwana kuti akurumidze kudzidza kupatsanura ruzha rwakaoma kubva kune runyoro runyoro, makonzonendi kubva pane mavhawero .. Kushungurudzika kunoiswa pane dhiziri (Kudonhedzwa pamusoro pepwere).
Mukunyora ruzha chirongwa chegiredhi 1 hapana chinhu chakaomarara. Iwe unofanirwa kuyeuka chii uye ndeapi mavara aunoda kuratidza. Muchirongwa tinoshandisa mavara matatu: tsvuku, bhuruu uye girini.
Ehezve, iwe unofanirwa zvakare kuziva kuti zvii zvinonzwika. Zviratidzo izvi zvinokubatsira.
Yakakurudzirwa - Chikwekwe Varidzi - 16+
Mibvunzo ye56 mu database yakagadzirwa mu 0,292 masekondi.